बाबुराम भट्टराईलाई लागेको रोग के हो? – Health Post Nepal
बाबुराम भट्टराईलाई लागेको रोग के हो?
२०७७ फागुन १० गते १२:०१
‘म रोगको विशेषज्ञ चाहिँ होइन। पूर्वप्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सल्लाह दिने चिकित्सक भएकाले मैले नेपालका चिकित्सक डा.अजित खनाल, निदान अस्पतालका डाक्टरहरू डा. लोचन कार्कीहरूसँग छलफल गरेको थिएँ‘, डा. शाहले भने, ‘भारतमा गएर क्लोनोस्कोपी वा इन्डोस्कोपी गर्दा इन्सिडियोस फाइन्डआउट होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौं।
बाबुराम भट्टराइले ट्विट गर्दै नेपालमा २१ औं शताब्दीमा शरीरको कुनामा पलाएको ट्युमर सामान्य कि घातक पत्ता नलाग्नु दुखद् भएको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘मेरो स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुहुने सबै साथीहरू अहिले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको अतिथिकक्षमा बसेर घोत्लिँदै गर्दा अत्यन्त लज्जित÷दुखित छु। २१ औं शताब्दीमा शरीरको कुनामा पलाएको ट्युमर सामान्य कि घातक हो छुट्याउन नसकेर विदेशमा छु। सामान्य नागरिकको के होला?’
तर, बरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. झा नेपालमै उपचार सम्भव हुने बताउँछन्। ‘मेडिकल साइन्सको कुरा गर्दा नेपालमा धेरै रोगको उपचार सम्भव छ। नेपालभन्दा बाहिरी देशमा पोस्टअप केयर राम्रो छ। टेक्नोलोजि राम्रो छ। दक्ष जनशक्ति बढी छ’, उनी भन्छन्, ‘पर्याप्त जनशक्ति हुँदा सानो–सानो कुराको केयर गर्न सकिन्छ।
One thought on “बाबुराम भट्टराईलाई लागेको रोग के हो?”